လမ်းပြကြယ်: ဒို့တတွေပြောချင်ကြတယ်။ အပြင်မှာ ပြောခွင့်မရလို့ ဒီမှာပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒို့အသံတွေ သိပ်မကြာခင်မှာ အပြင်ကို ရောက်ရမယ်။
ဒို့တတွေပြောချင်ကြတယ်။ အပြင်မှာ ပြောခွင့်မရလို့ ဒီမှာပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒို့အသံတွေ သိပ်မကြာခင်မှာ အပြင်ကို ရောက်ရမယ်။
(17th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
အများကြီး မတောင်းပါဘူး အခွင့် အရေးတခုလေးပါဘဲ အဲဒါက ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်း လွှတ်ပေးဖို့ ပါဘဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။
အားလုံးမျှော်လင့်တောင်းတနေ့တဲ့ ယုံကြည့်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါတော့။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသာများအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်။ ။
နှစ်မကူးခင်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူများထံမှ နှစ်သစ်ကူး မေတ္တာလက်ဆောင်များကို ရယူပါ။
Release Min Ko Naing and all political prisoners now. Free Min Ko Naing and all political prisoners now. 17/12/11 11.00am
သိန်းစိန်ရေ..သတ္တ၀ါ ခြင်းအတူတူ မေတ္တာ ထားပါ..မေတ္တာထားတဲ. အနေနဲ. ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ...
ပြည်သူအားကိုယ်စားမပြုသော မည်သည့်အစိုးရကိုမဆို လုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ နိုင်ငံရေးဗန်းပြပြီး အစားချောင် အချောင်စားနေကြသော အတုအယောင်နိုင်ငံရေးသမားများအား လုံးဝ (လုံးဝ) ဆန့်ကျင်သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို မတရားအကျဉ်းချထားခြင်းမှ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
စစ်မှန်သော မျိုးချစ်စိတ်တစ်ခုပဲ၊ သူတို့ရင်ထဲက လက်နက်ပါ။
ဒါ ….. ပုန်ကန်မှုတဲ့လား ......
thailand 9:27 am 17 december 2011
Ko Min Ko Naing ရေ လွမ်းစိမ့်ဆိုတဲ့ စာလေးတွေဖတ်ရင်း အဓိပတိလမ်း တလျှောက်မှာ ... ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့မှာ ၈၈ ဥိးဆောင်သူ နောင်တော်တွေ ကို ပြန်မြင်ယောင် မိပါတယ်...အကြာကြီး စတေးနေခဲ့ရသူတွေကို အစဉ်လေးစား လျှက်...အကို တို့ အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ကြပါစေ။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.17) 2:04pm Japan Standard Time.
မတရားမှုကို တွန်းလှန်ခဲ့သူတွေရဲ့ နေရပ်က အကျဉ်းထောင်တဲ့လား?
စနစ်ဆိုးတခုကို မြေလှန်ခဲ့လို့ ရရှိတဲ့ အကျိုးက အညှိုးအတေးတွေလား??
ပြည်သူ့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့လို့ ချီးမြှင့်တဲ့ဆုလာဒ်က ရက်စက်ခြင်းတဲ့လား??? သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန် သက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ပေးဆပ်မှုတိုင်းမှာ ထိုက်တန်တဲ့ ရလာဒ်ထွက်မလာခဲ့တဲ့ တို့နိုင်ငံရဲ့ ဖော်မြူလာကို ငါမုန်းနေမိတယ်..။
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးပါ..။
၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ...အမြန်လွှတ်ပေးေ၇း.....ဒို့ အေ၇း ဒို့ အေ၇း
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ…...
နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် သားကောင်းရတနာတွေဟာနံရံလေးဘက်ကြားကသံတိုင်နောက်ကွယ်တွေမှာရှိနေပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.၈၈မျိုးဆက်တွေ၊ကိုဒီငြိမ်းလင်းနှင်.၂၀၀၇မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင်. တိုင်ါ်ရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ဦးဂမ္ဘီရနှင်.၂၀၀၇ရွှေဝါေ၇ာင်သံဃာတော်များ၊ကိုနေဘုန်းလတ် နှင်.သတင်းနှင်.မီဒီယာသမားတွေ၊ယုံကြည်ချက်ကြောင်.တခြားပုဒ်မတွေနှင်.အကျဉ်းချ ခံထားရတဲ.ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်တို.လိုသူတွေ၊မိဘမဲ.ကလေးပညာေ၇းတွေလုပ်ဆောင် ခဲ.တယ်.ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော်၊လယ်ယာမြေမတရားအသိမ်းခံရပြီးဖမ်းဆီးခံထား ရတဲ.လယ်သမားဦးကြီးတွေနှင်.တခြားယုံကြည်ချက်ကြောင်.အကျဉ်းချခံထားရသူတွေဟာ မဖြစ်မနေလွှတ်ပေးရမယ်.နိုင်ငံ့သူရဲကောင်းတွေပါဘဲ။နိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ.ဖြိုးပြီးကောင်းစားစေလို တဲ.ဘုံသဘောတူညီချက်ရှိတယ်ဆိုရင်လက်တွဲလျောက်လှမ်းဖို.မဖြစ်မနေလွှတ်ပေးရမယ်. သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ချက်ချင်းလွှတ်...
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ ။
လူငယ်တွေရဲ့ နိူးကြားမှု့၊ကျောင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု့ ၊ပြည်သူလူထုရဲ့ အားပေးမှု့ စတာတွေ၊
ဗမာပြည်သူတွေ ပေးဝေတဲ့ မေတ္တာ တရားတွေ ၊ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကျောင်းနံရံတဝိုက် ဒေါင်းအလှံ စိုက်တဲ့ အမျိုးသားရေး၊နိုင်ငံရေး ကို ဘဝတွေ ၊အသက်တွေ ၊နှိပ်စက်မှု့ဒဏ်ကြံခံပြီး..အာဏ 'မ'မက်တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင်လုပ်နေသူ.,အနစ်နာခံ သတ္တိသွေးရှိတဲ့ ""ကိုမင်းကိုနိူင်နဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ...နိုင်ငံကောင်းစားရေး၊ပြည်သူကောင်းစားရေး လှုပ်ရှားနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များ ...ဝန်ခံချက်မပါ....ချက်ချင်းလွှတ်''
ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်လက်တွေကျကျကျင့်သုံးနေသူလို့ကြေညာနေယုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး...အကောင်အထည်ဖော်ပြဖို့ တကယ်လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ပြစေချင်ပါတယ်.။။။